Nhau - ntroduction uye Clinical Kunyorera kweLaryngeal Mask Airway
kutanga uye Clinical Kunyorera kweLaryngeal Mask Airway
Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd. yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2005. Iyo iri muHaiyan County, Jiaxing, China inova nzvimbo yepakati pehupfumi hwakagadzirwa Yangtze Rwizi Delta uye iri padyo neShanghai, Hangzhou neNingbo, pamwe neZhapugang -Jiaxing-Suzhou Expressway, Hangzhou-Ningbo Expressway uye Jiaxing South Station. Nzvimbo yayo yenzvimbo yepamusoro, uye chekufambisa chiri nyore uye chinokurumidza.
Iyo inovhara nharaunda yeinosvika zviuru makumi maviri nezviviri ne20000workshop4,000㎡ kirasi 100.000 yakachena kamuri uye 300㎡ murabhoritari. Chiyero chebhizinesi chakatsiga mumabhizimusi gumi epamusoro muEast China. Uye kugona kwekugadzira uye kutengesa kwave kuri matatu epamusoro muChina kwemakore mashanu akateedzana Zvigadzirwa zvakapfuura ISO13485: 2016, European CE uye FDA certification.
Kutanga kweLaryngeal Mask Airway
Makuriro ekushandisa: Kangyuan's laryngeal mask airway inokodzera yekufefetera mweya kune varwere vanoda general anesthesia uye emergency kumutsidzira, kana kumisikidza kwenguva pfupi isiri-inogadzirisa yekugadzira nzira dzepamhepo dzevamwe varwere vanoda kufema. Kuita: Kana ichienzaniswa neyakavharika control solution, iyo pH mutsauko iri -1.5; chigadzirwa chacho chisina kuchena, chakaomeswa neethylene oxide, uye iyo yakasara ethylene oxide haina kupfuura 10μg / g.
1. Imwe-Tube Laryngeal Mask Mhepo Yekushandisa Imwechete
100% yekurapa giredhi silicone yepamusoro biocompatibility.
Asiri-epiglottis-bar dhizaini inopa nyore uye yakajeka kuwana kuburikidza nechiedza.
5 angular mitsara inoonekwa kana cuff iri mune yakati sandara chinzvimbo, iyo inogona kudzivirira cuff kuti defom panguva yekuiswa.
Yakadzika mbiya yeiyo cuff inopa yakanakisa chisimbiso uye inodzivirira iko kutadziswa kunokonzerwa neepiglottis ptosis.
Kurapa kwakakosha kwecuffs pamusoro kunoderedza kuvuza uye kusuduruka zvinobudirira.
Pasina kushandisa laryngoscopy glottis, deredza kuitika kwehuro, glottis edema uye mamwe matambudziko.
Inogona kuiswa nyore, inongoda masekondi gumi kugadzirisa dambudziko rekufema.
2. Imwe-Tube Yakasimbiswa Laryngeal Mask Airway
5 angular mitsara inoonekwa kana cuff iri yakati sandara chinzvimbo, iyo inogona kudzivirira iyo cuff kuti deform panguva yekuisirwa.
Spiral yekusimbisa inoderedza kupwanya kana kinking.
360 ° kukotama, yakasimba anti-kukotamisa mashandiro, inokodzera kufefetera panguva yekuvhiyiwa munzvimbo dzakasiyana dzevarwere.
Nhungamiro tsvimbo ine arc yakaumbwa inosarudzwa kuti ifambise kuiswa kweLMA zvinoenderana neatomical uye muviri chimiro chemuromo nehuro yemunhu.
3. Imwe-Tube Laryngeal Mask Airway neEpiglottis Bar
Yakagadzirwa ne100% inotumirwa kunze-kwekurapa-giredhi silicone.
Mitsara mishanu yemakona inoonekwa kana cuff iri munzvimbo yakati sandara, inogona kudzivirira cuff kuti iite deform panguva yekuisirwa.Iviri -epiglottis-bar dhizaini mundiro, inogona kudzivirira kuvharirwa kunokonzerwa neepiglottis ptosis.
Kurapa kwakakosha kwecuff pamusoro kunoderedza kuvuza uye kuchinja zvine mutsindo.
4. Imwe-Tube Laryngeal Mask Airway neEpiglottis Bar
5. Double-chubhu Yasimbiswa Laryngeal Mask Airway
Iko kune maviri akapatsanurwa mweya uye mapaipi ekudhirowa, ayo akaenzana uye akabatana neiyo yemweya nzira uye yegurokuro, iyo inoderedza zvakanyanya kuitika kwereflux uye chishuwo, uye panguva imwecheteyo inobatsira kuiswa nekumiswa kwemasiki emarara.
Iyo yakazvimirira gastric drainage chubhu inogona nemaoko uye zvisina kunaka kukweva zviri mukati medumbu kudzivirira njodzi ye Reflux.
Yakagadziriswa uye yakawedzera inflatable cuff, inosimbisa chisimbiso chehuro, inogona kuita yakanaka yekumanikidza kufefetedza kwenguva refu, uye kuwedzera mashandisirwo emhando yeLMA.
Iyo yakavharidzirwa yekuvhara padhi inogona kushandiswa seino zino padhi, iri nyore kugadzirisa, inongoda tepi kugadzirisa dambudziko rekugadzirisa.
1. I-LMA, inofanirwa kutarisa nezve maratidziro ekunyorerwa kwechigadzirwa.
2. Kupedza gasi iri mumhepo yeiyo laryngeal mask airway kuitira kuti hood yakanyatso gadzika.
3. Isai shoma shoma yesaline yakajairika kana gel yakanyungudika nemvura yekuzora kuseri kweichi chivharo chehuro.
4. Musoro wemurwere wainge wakadzoka zvishoma, nechigunwe chake chekuruboshwe mumuromo wemurwere nekubata rushaya rwemurwere, kuti awedzere mukaha uri pakati pemuromo.
5. Uchishandisa ruoko rwerudyi kubata chinyoreso chakabata maskiyari, kuita kuti zviwanike, munwe wemunwe uye munwe wepakati uchipesana nemuviri wekubatanidza uye iyo yekufefetera chubhu yemarara, vhara muromo uchienda kunzira iri pakati nepakati peshaya yepasi, rurimi runonamira pasi pharyngeal LMA, kudzamara pasisina kumbosvika parizvino. Zvakare inogona kushandisa inodzosera nzira yekuisa laryngeal mask, ingovhara muromo wakananga mukanwa, ichaiswa mumuromo kuenda kuhuro pazasi peye laryngeal mask, uye 180 ° mushure mekutenderera, uyezve ramba uchisundira pasi laryngeal mask, kusvikira isingakwanise Push kusvika zvino. Paunenge uchishandisa yakakwidziridzwa kana ProSeal laryngeal mask ine giraidhi tsvimbo. Iyo tsvimbo yekutungamira inogona kuiswa mukati memhepo mhango kuti usvike pane yakatarwa nzvimbo, uye kuiswa kweye laryngeal mask kunogona kudhonzwa kunze mushure mekuiswa kweye laryngeal mask.
6. Mukufamba pamberi perimwe ruoko zvinyoro nyoro nemunwe uchimanikidza kudzivirira laryngeal mask airway catheter displacement.
7. Zvinoenderana nemazita ekubhadharisa bhegi rizere negasi (huwandu hwemhepo haugone kupfuura mwero wekuzadza), batanidza iyo yekufema wedunhu uye woongorora kana yakanaka kufefetedza, senge kufefetedza kana kutadzisa, inofanirwa maererano nematanho ekuiswazve yemasikisi emarara.
8. Kusimbisa chinzvimbo chemasikisi yemarara chakarurama, kufukidza iyo pad pad, yakagadziriswa nzvimbo, chengetedza mweya.
1. Varwere vaiwanzo kuve nemudumbu uzere kana zvemukati zvemukati, kana vaive netsika yekurutsa uye vamwe varwere vaiwanzoita reflux.
2. Varwere vane laryngeal edema, kuzvimba kwakanyanya kwenzvimbo yekufema, uye pharynx abscess.
3. Hosha yehuro inokonzeresa kuvharika kwemhepo, kuderedzwa kwemapapu kutevedzera, kana kushomeka kwepamhepo, vanhu vanoda mweya wakanaka wekumanikidza.
4. Varwere vane trachea yavo yakamanikidzwa uye yakapfava uye vanovhara mweya mushure meanesthesia.
5. Vaya vari seganiki kune zvigadzirwa zvigadzirwa.
6. Varwere vanoonekwa nemakiriniki kunge vasina kukodzera chigadzirwa ichi.
Clinical tsika yeakaviri-chubhu laryngeal mask:
Kuchengetedza uye Kutakura:
Nzira dzekufambisa dzinofanirwa kuve dzakachena uye dzakachena, uye sosi yemoto inofanira kuve yega. Zvigadzirwa zvinofanirwa kuchengetwa munzvimbo ine hunyoro isingasvike 80%, iyo tembiricha haina kupfuura 40 degrees Celsius, hapana magasi anoparadza uye yakanaka yekufefetedza yakachena kamuri. Dzivisa zuva rakananga, uye zvinorambidzwa zvachose kuzvichengeta pamwe nezvinhu zvine chepfu uye zvine njodzi.
Post nguva: Jul-01-2021